> Resource> iPhone> Olee wepụ Videos si iPhone / iTunes ndabere
Enwere m ike wepụ vidiyo si na iPhone ndabere?
Ụnyaahụ, m iPhone e zuru. M nwere nza nke obere videos echekwara na ya. O doro anya na m ike inwe ha kpọmkwem site iPhone. Achọghị m ka m ịzụta ọzọ iPhone. Ya mere ajụjụ bụ, m nwere ike wepụ videos si iPhone ndabere faịlụ? M na synced iPhone na iTunes mgbe nile. Olee otú m nwere naghachi vidiyo si na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ?
Wepụ vidiyo si na iPhone ndabere, e nwere nanị otu ụzọ: eji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, ma na ngwá ọrụ na-abụghị nanị otu. Ọ bụrụ na ị na-adịghị echiche ọ bụla banyere ya ugbu a, Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac) nwere ike ịbụ oké nhọrọ. Nke a na usoro-enye gị ohere wepụ video na ndị ọzọ na data si iPhone / iTunes ndabere na 2 nzọụkwụ, n'agbanyeghị na ị na-eji a Windows kọmputa ma ọ bụ a Mac OS otu. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-enye gị a ikpe mbipute, nke na-ahapụ gị wepụ na ịhụchalụ iPhone ndabere data for free. Ntak-agbalị ya ugbu a?
Cheta na: E wezụga adịrị video si iTunes ndabere, Wondershare Dr.Fone maka iOS nwekwara ike ozugbo naghachi ehichapụ vidiyo si na iPhone, iPad na iPod aka. Ọ bụ ezigbo uru mgbe ị na-adịghị ihe iTunes ndabere mgbe adịkwa mkpa videos.
Ọzọ, ka na-agbalị otú naghachi vidiyo si na iTunes na nkwado ndabere na nzọụkwụ. Ma nsụgharị na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Ebe a, na-Windows version ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ iPhone ndabere ma wepụ ya
Gbaa ndị omume na kọmputa gị mgbe ị wụnye ya. Wee pịa na naputa site na iTunes ndabere File menu n'elu nke usoro ihe omume si window. Ozugbo ị na-na na n'ebe ahụ, usoro ihe omume ga-ahụ ihe niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị na-akpaghị aka. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa na Malite iṅomi bọtịnụ wepụ ya.
Rịba ama: Mgbe ị na-eme nke a, ị na-adịghị mkpa na-esi gị iPhone ejikọrọ ma ọ bụrụ na ọ bụ na aka gị. Ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ga-emelitere ozugbo ị tụgharịrị na mmekọrịta akpaaka na iTunes.
Nzọụkwụ 2. Tulee na-agbake vidiyo si na iPhone ndabere
Mgbe mmịpụta, usoro ihe omume ga-enye gị azụ a Doppler N'ihi ya, ebe i nwere ike ịhụchalụ na ego nkwado ndabere na mpaghara data na edemede. N'ihi na videos, i nwere ike ịhụ ha na igwefoto Roll udi. Videos na-adịghị previewable. Mkpa ka ị naghachi ha gị na kọmputa na-ekiri ha na a ọkpụkpọ. Ọ bụ nnọọ mfe. Tinye akà rà ihe ọ bụla ị chọrọ na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị. Ọ gwụla.
Ọ bụrụ na ị chọrọ kpọmkwem iṅomi gị iPhone naghachi furu efu data site na ya, i kwesịrị ka ịgbanwee gaa na ndị ọzọ mgbake mode: Naghachi si iOS Ngwaọrụ. Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone, ike iṅomi ya na-agbake data ị chọrọ. Ọ bụ na-ọrụ dị mfe. Na-agbalị nnọọ ya site onwe gị na ikpe mbipute mbụ.
Olee otú Wepụ Photos si iPhone na nkwado ndabere na Wondows / Mac OS X
The Best Way naghachi ehichapụ Notes on iPad 2/3
iPhone 6s (Plus) Atụmatụ na ụdịdị: 10 Ihe Anyị Chọrọ Lee na iPhone 6s (Plus
Olee otú ka Wepụ All Data si iPhone
[Chezọrọ iPad ihuenyo mkpọchi Paswọdu] Olee otú naghachi Data na ya